सफलताका लागि त दृढ विश्वास चाहिन्छ– नेपोलियन वोनापार्ट « Khabarhub
सफलताका लागि त दृढ विश्वास चाहिन्छ– नेपोलियन वोनापार्ट
एकपटक फ्रान्सेली सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट आफ्नो सेनापतीलाई एक यस्तो युद्ध लड्न भने, जहाँ विपक्षि सेनाको संख्या तीन गुणा बढी थियो ।
नेपोलियनको आदेश सेनापतिले सिरोधार्य गर्नै प¥यो । उनले युद्धको तयारी गरे । युद्धशुरूवात हुनु पहिले नेपोलियन समक्ष पुगेर सेनापतिले भने– महाराज, विपक्षी सेनाको संख्या हाम्रो भन्दा तीन गुणा बढी छ, हाम्रो तिन गुणा कम, थोरै सैनिकद्वारा युद्ध जित्न मुस्किलप्रायः छ ।
नेपोलियनले उनीतर्फ हेर्दै जवाफ दिए – तिमी अहिल्यै हारिसक्यौ सेनापति ! किनभने तिमीले विजयमा शंका ग¥यौं । छोड ! यो युद्ध म आफै लड्छु किनकी मलाई विश्वास छ म जितेरै छोड्ने छु । र, युद्धको अन्तमा नेपोलियन बोनापार्ट विजयको झण्डा फहराउदै आउँछन् ।
सफलताका उपर शंका गर्नु भनेकै आफूलाई कमजोर तुल्याउनु हो । र, कमजोर व्यक्तिले सफलताको ताज पहिरन सक्दैन । सफलताका लागि त दृढ विश्वास चाहिन्छ । यसैले नै हर असम्भवलाई सम्भव तुल्याइदिन्छ ।
प्रकाशित मिति : १९ माघ २०७५, शनिबार ५ : १३ बजे